संसारमा सबैभन्दा राम्रो COVID खोप अमेरिका र हवाई मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु को लागी नि: शुल्क उपलब्ध छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्वास्थ्य समाचार » संसारमा सबैभन्दा राम्रो COVID खोप अमेरिका र हवाई मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु को लागी नि: शुल्क उपलब्ध छ
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
Longs औषधि किनमेल छुट
हवाई मा आगन्तुकहरु $ 15.00 + कर र एक माई ताई को लागी सुझावहरु तिर्नुहोस्। COVID खोप, जे होस्, सित्तैमा छ र कुनै सुझावहरु स्वीकार गरीएको छैन।
हवाई मा भ्याक्सिन पाउने पर्यटकहरु भ्याक्सिन शट संग अतिरिक्त किनमेल छुट र giveaways प्राप्त गर्दै छन्।
यो सबै हवाई र हवाई करदाताहरु को राज्य को सौजन्य हो। यो COVID खोप संख्या तथ्या्क भ्रामक छ।
झूटो संख्या संग जनता लाई सहज मा राख्नु पक्कै पनी सुरक्षा को एक गलत भावना र संक्रमण र मृत्यु मा वृद्धि को लागी योगदान गर्न सक्छ।
धेरै अमेरिकी राज्यहरु जस्तै हवाई आफ्नो सबै बासिन्दाहरुलाई कोभिड १ against को बिरुद्ध खोप लगाउन मनाउन सक्दैनन्। अब उनीहरु चुपचाप आगन्तुकहरुलाई खोप प्रदान गर्दछन्, र त्यहाँ एक अँध्यारो कारण छ।
हवाई करदाताहरूले धनी अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरुलाई कोभिड -१ vaccine को खोप मानार्थ पाउन आमन्त्रित गर्दछन्।
हवाई गभर्नर Ige छ आगन्तुकहरुलाई घरमै बस्न आग्रह गर्दै। उनले किन खोप पर्यटन आगन्तुकहरुको उल्लेख गरेनन्?
केहि महिना पहिले, हवाई एक दिन 20-30 नयाँ संक्रमण रेकर्ड। अब पर्यटकहरु राज्यमा बाढी संगै कोविड १ infections संक्रमण र रेकर्ड मृत्यु को १,००० को लागी नयाँ घटनाहरु पर्यटन डराएको छ।
शपिंग मल्ल, होटल, र रेस्टुरेन्टहरु भीड भैरहेका छन्। आकर्षणहरु केहि मामलाहरुमा ट्रिपल प्रवेश शुल्क तिर्छन् र व्यस्त छन्। त्यहाँ Waikiki समुद्र तट मा एक तौलिया बिछ्याउन को लागी कुनै ठाउँ छैन, तर एक नयाँ तालाबन्दी अधिक र अधिक एक वास्तविकता बनिरहेको छ, तथापि, लेफ्टिनेन्ट गभर्नर जोश ग्रीन को अनुसार होइन।
गभर्नर इगेले भर्खरै आगन्तुकहरुलाई यात्रा को लागी पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे Aloha राज्य।
एउटै समयमा, हवाई मा औषधि पसलहरु स्थानीय मिडियामा विज्ञापन चलाउनुहोस् र वेबसाइटहरुमा मानिसहरु खोप लगाउन को लागी। नि: शुल्क खोपहरु टाढा उनीहरुको लागि ठूलो व्यवसाय हो र औषधि पसलहरु तिर्छन्। मानिसहरु लाई नि: शुल्क खोपहरु प्राप्त गर्न को लागी, धेरै पसलहरु छुट छुट्याउने शपिंग भाउचर आफ्नो पसलहरुमा हतियार प्राप्त गर्न को लागी दिन्छन्। हवाई मा, यो आगन्तुकहरु लाई सामेल गर्दछ।
त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा उपलब्ध धेरै खोपहरु छन्। राज्यहरु जस्तै हवाई र पर्यटन उद्योग मा भरोसा भ्याक्सिन तथ्या in्क मा अझ राम्रो देख्न को लागी रचनात्मक हुदैछ। यस्तो देखिन्छ कि यो कारण हो कि हवाई राज्य पर्यटकहरु लाई टाढा शटहरु दिइरहेको छ।
एशिया बाट हवाई को लागी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ननस्टप उडानहरु बहाली संगै, हवाई एयरलाइन्स, जापान एयरलाइन्स, र एएनए पर्यटकहरु लाई सेतो रेतीले समुद्र तटहरुमा लैजान्छन्। Aloha राज्य।
जापानी को लागी हवाई को यात्रा बलिदान बिना छैन। मूल को अन्तर्राष्ट्रिय बिन्दु को बावजूद, जापान मा प्रवेश गर्ने सबै यात्रीहरु एक को अधीनमा रहन्छन् आगमन मा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन र घरेलु उडानहरु, ट्याक्सीहरु, र रेलहरु लाई सामेल गर्न सार्वजनिक यातायात को उपयोग गर्न बाट प्रतिबन्धित छन्। हवाई बाट घर फर्कने जो कोहि जापान मा क्वारेन्टाइन मा रहनु पर्छ। किन केहि जापानीहरु छन् अझै हवाई को समुद्र तट को यात्रा?
पूर्वी एशिया सहित धेरै देशहरुमा खोप संख्या कम छ। फाइजर र Moderna सबैभन्दा प्रभावकारी र कम मांग कोभिड -१ vaccine खोप हो। दुबै खोप केहि देशहरुमा स्वतन्त्र रुपमा उपलब्ध छैन। अन्य देशहरु मा नागरिकहरु प्राय: हतारमा आफ्नो जीवन बचाउन को लागी खोप प्राप्त गर्न को लागी तयार छन्।
Waikiki मा एक Longs औषधि मिनेट क्लिनिक नर्स, जो नाम बताउन चाहँदैनन् भनिएको छ eTurboNews:
"हामी धेरै पर्यटकहरु Longs ड्रग्स मा हामीलाई खोप लगाउन को लागी सोध्छौं।"
तपाइँको खोप पर्यटकहरु कहाँ बाट हुनुहुन्छ?
"प्रायजसो जापानी, तर कोरियाली, र यहाँ सम्म कि यूरोपीयन आगन्तुकहरु खोप लगाउन को लागी सोध्छन्। हामी जापानी सहयोगी बोल्ने स्टाफ छ। हामी पनी घरेलु आगन्तुकहरुलाई पक्कै खोप लगाउन अनुरोध गर्दछौं।
के तपाइँ कसैलाई खोप दिन को लागी अनुमति दिईरहनुभएको छ?
"हो, हामी भेदभाव गर्दैनौं। हामी सांख्यिकीय प्रयोजनहरु को लागी मात्र एक जातीय पृष्ठभूमि को लागी सोध्छौं, तर हामी नागरिकता, निवास स्थिति, आदि को लागी सोध्दैनौं।
विदेशी आगन्तुक वा राज्य बाहिरका पर्यटकहरुलाई खोपको लागी Longs Drugs ले कति शुल्क लिन्छ?
"हामी यसको लागि चार्ज गर्दैनौं। हामी वास्तव मा एक किनमेल छुट वा खोप लगाउने जो कोहिलाई प्रोत्साहन थप्छौं। "
खोप को लागी कसले तिर्दैछ?
"हवाई राज्यले हामीलाई खोपको लागि तिर्दैछ।"
तपाइँ आगन्तुकहरुलाई कस्तो प्रकारको खोप दिदै हुनुहुन्छ?
"हामी संसारमा उपलब्ध सबै भन्दा राम्रो खोप प्रदान: कोभिड फाइजर वा Moderna खोप।"
राज्यलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कति गैर-बासिन्दाहरु भ्याक्सिन लिइरहेका छन्?
"राज्यले सोधिरहेको छैन कि हाम्रा ग्राहकहरु कहाँ बाट आउँदैछन्। हामी पासपोर्ट, चालक लाइसेन्स नम्बर जस्तै एक आईडी नम्बर, रेकर्ड। यसको साथ, हामी राज्य बिल।
के यो दाग नलाग्ने टीकाकरण संख्या रिपोर्ट हवाई राज्य सीडीसी को लागी पेश गरीरहेको छ?
"मलाई लाग्छ राज्यलाई थाहा छैन कि खोप लगाईएका मध्ये को बासिन्दा हुन् र को आगन्तुक हुन्। हामी सबै बिरामीलाई सोध्छौं 3-4 हप्ता पछि दोस्रो शट प्राप्त गर्न को लागी। मलाई लाग्छ यो होटल र रिसोर्ट्स, रेस्टुरेन्ट, र हाम्रो अर्थव्यवस्था को लागी राम्रो व्यापार हो।
यसको आधारमा, हवाई मा एक %१% पहिलो शट खोप, र राज्य मा ५१% पुरा तरिकाले खोप दर धेरै भन्दा धेरै गलत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्लै, १,००० भन्दा धेरै आगन्तुकहरु हवाई मा हरेक दिन गैर स्टप उडानहरु मा आइपुग्छन्। धेरै अधिक अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरु यूएस मुख्य भूमि को माध्यम बाट उडानहरु लाई जोड्ने आगमन।
घरेलु रूपमा, हवाई मा एक दिन मा २०,००० भन्दा बढी दैनिक आगमन भएको थियो जब देखि खोप एक नियुक्ति बिना स्वतन्त्र रूप बाट उपलब्ध थियो।
यसले धेरै प्रश्नहरु खोल्छ।
गलत खोप संख्या प्रकाशित भएको मा, हवाई मा मानिसहरु उनीहरु बाट अपेक्षा गर्नु भन्दा बढी कमजोर छन्?
के यो व्याख्या गर्दछ कि हवाई को संक्रमण र मृत्यु दर लगभग हरेक दिन नयाँ रेकर्ड रेकर्ड गर्दै छन्?
किन हवाई करदाताहरु खोप को लागी प्रदान गर्दछन्? पर्यटकहरु घरबारविहीन वा गरीब छैनन्। यदि एक रिसोर्ट वा एयरलाइन यसको लागी तिर्न मद्दत गर्न चाहन्छ - ठीक छ। घरबारविहीन र हवाई मा किनारा मा बस्ने धेरै मानिसहरु को एक रेकर्ड संख्या संग, राज्य को राजस्व को आवश्यकता छ यस्तो विशाल सामाजिक मुद्दाहरु को ख्याल राख्न।
विश्वका धेरै देशहरुमा रेकर्ड कोभिड प्रकोप र मृत्यु भएको छ। उनीहरुलाई खोपको तत्काल आवश्यकता छ। उनीहरुका नागरिकहरुले हवाई छुट्टी लिन सक्दैनन्।
भ्याक्सिन धनी पर्यटकहरुलाई टाढा दिनुको सट्टा, हवाईले खोप बाट राजस्व उत्पन्न गरी खाँचोमा परेका देशहरुमा किन पठाउँदैन?
खोप पर्यटन मा केहि गलत छैन। सान मारिनो, इजरायल, र धेरै अन्य देशहरु एक फस्टाउने खोप पर्यटन उद्योग छ। मुद्दा तथ्या t्कलाई धमिलो पार्दै र गलत तथ्यहरु प्रदान गरी बासिन्दाहरुलाई खतरामा राखेको छ, जुन न केवल गलत हो, तर सायद आपराधिक पनि हो।
के हवाई ठूलो संख्या मा र गोपनीयता को एक डिग्री संग गरीरहेको छ - यी गतिविधिहरु लाई आधिकारिक रूप बाट प्रचार र गुआम मा प्रचार गरीन्छ गुआम पर्यटन बोर्ड.